Nweta ihu igwe Android ga-abịa site n'aka nke ndị ọkachamara | Gam akporosis
Fewbọchị ole na ole gara aga Apple gosipụtara ọgbọ ọhụrụ ya iPhone, yana iPhone X dị ka ọkọlọtọ ọhụrụ nke ndị na-emepụta Cupertino. Ọnụ nke na-apụ apụ maka ID ID, the ọdịdị ihu usoro nke na-abịa dochie Touch ID, usoro mkpịsị aka Apple.
Ọ bụghị oge mbụ anyị na-ahụ usoro dị ka nke a, na-enweghị ịga n'ihu Samsung enweelarị ihu ihu usoro ụfọdụ n'ime ekwentị ya n'agbanyeghị, emehiela, ọrụ ya abụghị ịbụ onye na-anọchi akara mkpịsị aka. Nke a bụ ebe ọ na-abata Qualcomm, nke na-arụ ọrụ n'onwe ya Android ọdịdị ihu.
Qualcomm na-arụ ọrụ ka onye nhazi Snapdragon 845 ya nwere teknụzụ njirimara ihu 3D gam akporo
Ọ dị ka ndị ọrụ gam akporo agaghị echere ogologo oge ịnụ ụtọ teknụzụ dịka nke ID ID. Onye isi na emeputa ihe nhazi maka igwe eji acho acho acho ihe ojoo ma maka nke a, ya na ndi kompeni a Himax, ọkachamara na teknụzụ a, iji mee ka ihu igwe dị na ngwaọrụ gam akporo.
Dị ka a leaked akụkọ, na 3D ihu ihu, nke na-arụ ọrụ n'okpuru teknụzụ a na-akpọ SLiM (Structure Light Module), ga-enwe ọganihu iji nwee ike dochie onye na-agụ akara mkpịsị aka.
Ihe kachasị mma bụ na Teknụzụ SLiM Ọ nwere ike kacha nta oriri ike ya mere ọ ga-abụ dakọtara na ngwaọrụ ọ bụla. Anyị amaghị nke ga-abụ ụzọ mbụ ga-anabata teknụzụ a, mana ihe doro anya bụ na sistemụ ihu ihu dị ebe a iji nọrọ.
Ọ gaghị ewe oge tupu ị hụ nke mbụ Gam akporo ekwentị na ọdịdị ihu usoro site na Qualcomm. O doro anya na mbipụta na-esote nke Mobile World Congress anyị ga-enwe ogologo ndepụta nke gam akporo smartphones na usoro nyocha ihu, ihe a ga-ahụ bụ ma ọ bụrụ na ọ na-anọchi onye na-agụ akara mkpịsị aka.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Ngosipụta ihu ihu gam akporo ga-abịa site na aka nke qualcomm